पुरुषको तुलनामा महिला चाँडै थाक्छिन् ! | Hamro Doctor News
पुरुषको तुलनामा महिला चाँडै थाक्छिन् !
By HD Support Team
हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार महिलाहरु पुरुषको भन्दा चाँडै थाक्ने गरेकी छिन् । अध्ययनमा भनिए अनुसार महिलाहरुको शरिरको घडि पुरुषको शरिरको घडीको तुलनामा १ दशमलव ७ देखि २ दशमलव ३ घण्टा फास्ट चल्ने गर्छ । जस कारण महिलाहरु पुरुषको तुलनामा चाँडै थाक्छन् र साँझ पर्ने वितिकै उनीहरुलाई निद्रा लाग्न थाल्छ ।
यो अध्ययन क्यानडा स्थिति ल्याकेस्टर यूनिभर्सिटी मेडिकल स्कूलका अध्ययनकर्ताहरुले गरेका हुन् । अध्ययनमा भनिएको छ, पुरुष र महिलाहरुको शरीर एकदमै फरक–फरक प्रक्रियाले काम गर्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक घडी १ दशमलव ७ देखि २ दशमलव ३ घण्टा छिटो चल्ने गर्छ । उनको धड्कन पनि पुरुषको तुलनामा बढी तिव्र गतिमा चल्ने गर्छ । अध्ययनकर्ताहरुले यसको प्रमुख कारण महिलाहरुको सेक्स हार्मोन भएको बताएका छन् ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार, सेक्स हार्मोनका कारण हामी परेला झिम्काउँछौँ, हाम्रो पाचन क्रिया काम गर्छ, धड़कन चल्छ र कपाल सेतो अर्थात् फुल्ने हुन्छ । यसै कारण महिलाहरुलाई पुरुषको तुलनामा चाँडै थकान महसूस हुन्छ । महिला र पुरुषमा हार्मोनको मात्रा पनि छुट्टा–छुट्टै हुनाले धेरै काम क्रियाकलाप भिन्न–भिन्न हुन्छन् । जस्तै ः पुरुषमा पाचन क्रिया, महिलाको भन्दा छिटो हुन्छ, पुरुषको कपाल महिलाको भन्दा छिटो बढ्ने गर्छ ।
तिव्रगतिमा चल्छ महिलाको धड़्कन
महिलाहरुको मुटु पुरुषको भन्दा सानो हुन्छ । पुरुषको मुटु १८० ग्रामको हुन्छ भने महिलाहरुको मुटु मात्र १२० ग्रामको हुन्छ । पुरुषको भन्दा महिलाको मुटु आकारमा सानो भएको कारणले महिलाहरुको मुटु तेज गतिमा धड्कने गर्छ । अर्थात् पुरुषको मुटु एक मिनेटमा ७० देखि ७२ पटक धड्किन्छ भने महिलाहरुको मुटु एक मिनटमा ७८ देखि ८२ पटक धड्किन्छ ।
नोटिन्घम यूनिभर्सिटीका अध्ययनकर्ताका अनुसार महिलामा एस्ट्रोजनको मात्रा बढी हुन्छ । जसले गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाको परेलापनि धेरै पटक झिम्किने गर्छ ।
यूनिभर्सिटी अफ मिसौरीको अध्ययन रिपोर्टमा महिलाहरुमा नशीलो पदार्थको असर किन चाँडै हुन्छ भन्ने पनि खुलाएको छ । अध्ययन रिपोर्टका अनुसार महिलाको शरीरमा अल्कोहल ब्रेक डाउन गर्ने इन्जाइम्स निकै नै कम मात्रामा हुन्छ, जसले गर्दा महिलामा नशिलो पदार्थले बढी नशा हुने गर्छ ।
Last modified on 2018-10-05 09:37:36
पेट तथा खुट्टामा नसा फुट्ने समस्या के हो ?